स्पेन - Absolut Viajes | Absolut यात्रा (पृष्ठ २)
ला हर्मिडा घाटी स्पेनमा सबैभन्दा लामो छ। यसले तपाईंलाई पिकोस डी यूरोपा, स्मारकहरू र भव्य ग्यास्ट्रोनोमीका प्रभावशाली दृश्यहरू प्रस्ताव गर्दछ।
के तपाईं Bear पथको बारेमा बढी पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ? त्यसोभए हामी तपाईंलाई अस्टुरियसको यस वातावरणको बारेमा आज प्रदान गर्ने सबै जानकारीहरू नभुल्नुहोस्।
के तपाईंलाई मौन समुद्र तट थाहा छ? यो अस्टुरियसमा छ र यो सब भन्दा सुन्दर क्षेत्रहरू मध्ये एक हो, क्रिस्टल सफा पानी र प्रभावशाली दृश्यहरू जुन तपाईले खोज्नु पर्छ।
कोस्टा ब्लान्काले यसको सुविधायुक्त जलवायु शानदार समुद्रतट, विस्तृत ऐतिहासिक-कलात्मक सम्पदा र स्वादिष्ट ग्यास्ट्रोनोमीमा थप गर्दछ।
के तपाईलाई ग्यालसियाको ग्यास्ट्रोनोमी थाहा छ? त्यहाँ धेरै मीट डिशहरू, माछाहरू, डेजर्टहरू छन् र पाठ्यक्रम, तरल पदार्थहरू छन्, जुन तपाईंले हाम्रो मेगा भूमिमा स्वाद लिन सक्नुहुन्छ र खानुपर्दछ।
सान पेड्रो डी अल्काटारा
कोस्टा डेल सोलमा सान पेड्रो डे अल्केंतारा यस क्षेत्रका अन्य शहरहरूको रूपमा परिचित छैन। यद्यपि उनीहरूसँग तपाइँको धेरै प्रस्तावहरू छन्।
के तपाईं सेभिलको इस्ला म्याजिका भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीले यहाँ छोड्ने सबै डेटाहरू नहेर्नुहोस् किनकि तपाईं त्यसमा धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ।
येसा जलाशयमा तपाईले तातो स्प्रि .्ग र आराम गर्ने ठाउँ मात्र पाउनुहुने छैन, तर यो पैदल यात्रा र खेल मार्गहरूको लागि उपयुक्त छ। पत्ता लगाउनू!
यदि तपाइँ एक अद्भुत र बिभिन्न क्रिस्मस खर्च गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यी उत्तम गन्तव्यहरू पारिवारिक खानाबाट भाग्नको लागि उत्तम विकल्प हुन्छन्।
तथाकथित Cistercian मार्ग एक लामो यात्रा हो कि हामीलाई अद्वितीय स्थानको नजिक ल्याउँछ, जहाँ वास्तुकला गैस्ट्रोनमी र अधिक पूरा।
Lacuniacha एक प्राकृतिक पार्क हो कि हामीलाई एक सही मार्ग प्रदान गर्दछ दृश्य जीवहरूको साथ हरेक चरणमा जीवजन्तु र वनस्पति को एक विविध प्रकारको पत्ता लगाउन।
पुरानो शहर बर्नको मेहरावदेखि लिएर अविलाको पर्खाल सम्म, युरोपका यी सुन्दर मध्यकालीन शहरहरूले तपाईंलाई समय र स्थानमा यात्रा गर्न लायक बनाउँदछन्।
बास्क देशमा के हेर्ने: गेम अफ थ्रोन्सबाट प्रसिद्ध फ्लाईस्चसम्म
गेम अफ थ्रोन्सको दृश्य, जादुई बीच वन र मध्यकालीन गाउँहरू बास्क कन्ट्रीमा हेर्नका लागि केवल केही गहनाहरू हुन्।
ला मोलिना ती दर्शकहरूको लागि ती स्की रिसोर्टहरू मध्ये एक हो। यो हामीलाई प्रस्ताव गर्न सबै चीज पत्ता लगाउनुहोस्।
स्पेनमा सबै भन्दा राम्रो स्पा
यदि तपाईं अर्को सप्ताहन्त आराम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, स्पेनमा यी उत्तम स्पामा जानुहोस् जहाँ आरामले उत्तम स्वास्थ्यले पूरक हो।
कोलोमेरेस महल सब भन्दा अविश्वसनीय स्मारक हो र बेनेलमाडेनामा अवस्थित छ। आवश्यक भन्दा बढी भ्रमण!
यदि तपाईं पृथ्वीमा स्वर्ग खोज्दै हुनुहुन्छ भने क्यानरी टापुहरूमा फुर्तेवेन्टुरा नजिकै रहेको इस्ला डे लोबोसले गोप्य समुद्री तट र अद्वितीय पैदल यात्राको वचन दिन्छ।
म्याड्रिडका स्मारकहरू जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न
यसको प्लाजा मेयरदेखि देबोडको विदेशी मन्दिरसम्म म्याड्रिडका यी स्मारकहरू तपाईंले मिसिन सक्नुहुन्न स्पेनिश राजधानीको लागि उत्तम गाईड बनाउन।
हामी स्पेनमा सब भन्दा सुन्दर क्याथेड्रल समीक्षा गर्दछौं। धेरै पनी आकर्षण, कथा र पछाडि दन्त्यकथाको साथ ठाउँहरू। केही आवश्यक भ्रमणहरू
किंवदन्तीहरू जुग्रामरामदीका गुफाहरूमा बसोबास गर्छन्, क्युवास डे लास ब्रुजसको रूपमा परिचित छन्। एक जादुई स्थानको माध्यमबाट पैदल यात्रा जुन तपाईंले पत्ता लगाउनु पर्छ।
लेयर मठ हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक र वास्तुशिल्प परिसरहरू मध्ये एक हो। विचार गर्न एक अत्यावश्यक भ्रमण
क्यान्टाब्रियाका सुन्दर शहरहरू
हामी क्यान्टाब्रियाको सुन्दर शहरहरूको चयन गर्दछौं। ती स्थानहरूमा हिंड्नुहोस् जहाँ समय स्थिर छ र हामी तिनीहरूको सुन्दरताको प्रशंसा गर्न सक्छौं।
यदि तपाईंसँग २ वा days दिन नयाँ डिस्कनेक्ट गर्न र नयाँ ठाउँहरू पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने, साप्ताहिक अन्तका लागि यी गन्तव्यहरू तपाईंको लागि सजिलो बनाउँदछ।
विश्वको dan नृत्य
विश्वका यी dan नृत्यहरूले नृत्यका लागि मात्र आमन्त्रित गर्छन्, तर ग्रहका विभिन्न कुनाका प्रभाव र संस्कृतिलाई अझ राम्रो बुझ्नको लागि।
स्पेनमा सब भन्दा सुन्दर महलहरूले विगतको दर्शन, किंवदन्ती र विश्वको इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन हामी आज समीक्षा गरिरहेका छौं।
सान जुआन डे ला पेनाको मठ
सान जुआन डे ला पेनियाको गुम्बा मध्यकालीन कालको सबैभन्दा प्रतीकात्मक ठाउँहरू मध्ये एक हो। एक कुञ्जी महापुरूष भरिएको कि वातावरण तपाईले थाहा पाउनु पर्छ
स्यान्टिल्लाना डेल मार्चमा के हेर्ने
सान्तिल्लाना डेल मार्च ती आवश्यक ठाउँहरू मध्ये एक हो। स्पेनको सब भन्दा सुन्दर शहर मध्ये एक जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ। यो हामीसँग यात्रा गर्नुहोस्!
सेटेनिल डे लास बोडेगास: ढुving्गामा नक्काशी गर्ने कला
अन्डालुसियाका सब भन्दा जिज्ञासु शहरहरू मध्ये एक मानिने सेतेनिल डे लास बोडेगासले तपाईंलाई चट्टानमा नै खोपिएका घरहरूको बीचमा रमाइलो पैदल यात्रामा निम्तो दिन्छ।
लास बार्डेनास रीलहरू प्राकृतिक पार्क हो जुन नभारामा भेटिन्छ। यो दुबै कार, बाइक वा पछाडि बाट अन्वेषण गर्न उत्तम छ। तपाईं हिम्मत ?.
स्यान्टियागो डे कम्पोस्टेला स्थानहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंलाई प्रेममा पर्दछ। यसको क्याथेड्रल, यसको वर्ग र यसको सडकहरूले तपाईंलाई धेरै पटक फेरि आउँनेछ।
संसारमा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटहरू
हामी विश्वका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू हेर्छौं जुन जलगर्ती पानी, सेतो बालुवा र सयौं ताडको रूखहरू बीचको संसारबाट भाग्न सक्छौं
यदि तपाईं ट्रुजिलोमा के हेर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, हामी एउटा विशेष भ्रमणको प्रस्ताव गर्छौं, जहाँ हामी यस सुन्दर शहर कोसर्सको सबै कुनामा कभर गर्दछौं।
मल्लोस डी रिग्लोस
मल्लोस डि रिग्लोस ह्युस्काको एक धेरै पर्यटन क्षेत्र हो। तिनीहरू चढाई वा पैदल यात्रा खेल संग साहसिक गठबन्धन।
यदि तपाईं जामोरामा के हेर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने हामी आशा गर्दछौं कि उनीहरूसँग तपाईंको यात्राको लागि अनन्त मन्दिर, भवन, वर्ग र अन्य आधारभूत बैठकहरू हुनेछन्।
संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू
जापानदेखि ग्रेनाडासम्म, हामी तपाईंलाई अन्तिम यात्रामा जानको लागि प्रोत्साहित गर्न संसारको महत्त्वपूर्ण स्मारकहरूमा डुबाउँछौं।
गार्गन्ता ला ओल्लामा के हेर्ने
गरगान्ता ला ओल्लाले प्रदान गर्ने सबै चीजको आनन्द लिनुहोस्। एक प्राकृतिक स्वर्ग, एक प्रभावशाली सांस्कृतिक सम्पदाको साथ तपाईंले खोज्नु पर्छ।
सेभिलमा बारियो डि सान्ता क्रुज: त्यहाँ कसरी पुग्ने, के हेर्ने
सेभिलमा रहेको सान्ता क्रुज नजिकैको देश, अन्डालूसियन राजधानीको मध्यभागमा रहस्य, रंग र डिन्डेडको भूलभुलैया हो।
भेले डेल जेर्टेमा के हेर्ने
जेर्टे उपत्यकामा यसको नगरपालिका, प्राकृतिक पोखरी र दृश्यहरू छन्, र अन्य धेरै सुन्दरताहरू जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न। तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्!
सियरा डि अरसेनाका यी अति सुन्दर गाउँहरूमा आफूलाई गुमाउनुको अर्थ होलभाको प्रान्तमा प्रवेश गर्नु हो जहाँ हेम, जादू र शान्ति छ।
के हेर्ने र के जिब्राल्टरमा खरीद गर्ने
यदि तपाईं कन्सेप्शन रेखाबाट टाढा जानुहुन्छ भने, तपाईंले म्याकएक्स, शपिंग र राम्रो विचारहरूको माइक्रोवर्ल्ड पाउनुहुनेछ। के हेर्ने र जिब्राल्टरमा के खरीद गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
स्प्यानिश टस्कनी: माटाराना (तेरूएल) मा के हेर्ने
मटररास, टेरुएलको माध्यमबाट हिंड्नु भनेको आफूलाई अर्को युगमा डुबाउनु हो। विचार गर्नका लागि तपाईले बिभिन्न शहरहरू पाउनुहुनेछ।
यदि तपाईं सम्पूर्ण परिवारको साथ छुट्टीमा जान चाहनुहुन्छ भने, भेले डी नुरिया वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि राम्रो विचार हो। प्रकृतिको बीचमा एउटा कुना।
एक गहना पत्ता लगाउनुहोस्, कल्पित कथा भरिएको, इतिहास र समय मार्फत यात्रा। गुआडालुपे मठ Cceres मा एक अनिवार्य भ्रमण हो।
प्लासेन्सियामा के हेर्ने
यदि तपाईं प्लासेन्सियामा के हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई केही पर्यटक आकर्षणहरूको साथ छोड्छौं। एक्स्ट्रेमादुराको 'पर्ल अफ द नर्थ' ले तपाईंलाई जित्नेछ।
रोंडामा के हेर्ने: लोककथा, डाउन्डे र महाकाव्य पुलहरू
शानदार ओल्ड ब्रिजबाट यसको मोरीश आकर्षणको कुनासम्म, त्यहाँ स्पेनको सबैभन्दा सुन्दर शहरहरूमध्ये एक, रोन्डामा देख्न धेरै छ।
परम्पराहरू सँगै सँगै आउँदछ बास्क पिन्कोसलाई जन्म दिन। आज हामी तपाईंलाई सबै आवश्यक डेटा तिनीहरूको प्रलोभनमा पर्न दिन्छौं।
सेभिलको भव्यता देखि बार्सिलोनाको विश्वव्यापी वातावरण सम्म, स्पेनका यी अति सुन्दर शहरहरूले हाम्रो देशको विरोधाभास पुष्टि गर्दछ।
एलिसेन्टका सुन्दर शहरहरू जुन तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्नेछ
चट्टानबाट सयौं समुद्री डाँडाहरूमा चढेर अर्को समयको महलहरूमा, एलिकान्टका यी सुन्दर शहरहरू आकर्षण र रहस्यले पूर्ण छन्। के तपाईं तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ?
क्यानरी टापुहरूले विकल्पहरू र आकर्षणहरूको कम्बल प्रदर्शन गर्दछ जुन टेनेरिफमा सबैलाई उपभोग गर्ने सबैभन्दा उत्तम केन्द्र हो। सपना समुद्र किनारमा पौडी खेल्नुदेखि लिएर स्पेनको उच्च शिखरमा चढ्न, त्यहाँ आउने महिनाहरूमा टेनेरिफमा धेरै चीजहरू छन्।
अस्टुरियसका सब भन्दा सुन्दर शहरहरू
ग्यास्ट्रोनोमी हरियो परिदृश्यहरु संग मिसिन्छ जो चट्टानहरु र सुन्दर समुद्र तटहरु द्वारा सजिलो छ। अस्टुरियसका सब भन्दा सुन्दर शहरहरू यो हुन्।
स्पेनका निम्न सब भन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये, हामी टेजाइजको सेता सडकहरूमा जान प्लाजा मेयर डी चिंचनको नर्कहरूमा पुग्न सक्छौं।
डुराटिन नदीको सिकलहरू
आज हामी सेगोभियामा अवस्थित प्राकृतिक पार्क हुँदै हिंडिरहेका छौं। लास होसेस डेल रियो डुरातनले हामीलाई स्मारक, सौन्दर्य र वनस्पतिको मिश्रण छोड्छ
Segovia को फार्म
शाही दरबार वा सेगोभियाको फार्मको माध्यमबाट यस पैदल यात्रा नगुमाउनुहोस्। संरक्षणको पूर्ण राज्यमा बगैंचा र झरनाहरू सहित एक अद्वितीय वातावरण।
सेप्टेम्बरमा यात्रा गर्न गन्तव्यहरूको यस चयनलाई नभुल्नुहोला जुन तपाईं चकित हुनुहुनेछ। तपाइँले त्यो महिनाको मजा लिनको लागि अनुपम ठाउँहरू पत्ता लगाउनु हुनेछ!
प्रकृतिको बीचमा एक उत्तम मार्ग यही हो जुन हामीले गारगन्ता डे लस इन्फर्नोसमा भेट्टाउनेछौं। Cesceres मा यो धेरै मनमोहक ठाउँ खोज्नुहोस्, जहाँ प्रकृति र ताजा पानी तालहरू मुख्य पात्रहरू हुनेछन्।
सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक पोखरी
गर्मी आउँदा, हामी जहिले पनि विश्राम दिनहरू बिताउन ठाउँहरू खोज्छौं र यदि यसलाई पानीले घेर्न सकिन्छ, अझ राम्रो। तसर्थ, हामीले सब भन्दा राम्रो प्राकृतिक पोखरीहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ जुन हामीले स्पेनभरि भेट्टाइरहेछौं। ती मध्ये कुन तपाईं अझै भ्रमण गर्न सक्षम हुनुहुन्न?
सोमिडो लेकहरू एक idyllic क्षेत्र हो जुन तपाइँले अवलोकन गर्नुपर्नेछ। तिनीहरू अस्टुरियसमा अवस्थित छन् र तिनीहरूले हामीलाई एउटा अद्वितीय सौन्दर्य र निस्सन्देह, धेरै प्राकृतिक छोड्छन्। त्यहाँ तपाईं प्रकृति यसको शुद्ध रूपमा, विभिन्न मार्गहरूमा वा विभिन्न गतिविधिहरूमा भाग लिन मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग अविस्मरणीय छुट्टी भन्दा बढी हुनेछ!
पुरानो शहर, यो पहिले नै ज्ञात छ, र त्यो भग्नावशेषमा छ। तर त्यसो भए पनि, बेल्साइटसँग हामीलाई धेरै देखाउन बाँकी छ। यसको पछाडि ठूलो इतिहास छ र आज यो पनि एक धेरै भेटिने स्थानहरू मध्ये एक हो। तपाईं उसलाई अझै चिन्नुहुन्न?
भ्यालेन्सियामा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
पहिले नै छुट्टीहरू र राम्रो मौसमको बारेमा सोच्दै, हामी भ्यालेन्सियामा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू भ्रमण गर्छौं। तपाईंको साथी वा परिवारको साथ रमाईलो गर्न अनौंठो र उत्तम ठाउँहरू। त्यहाँ तपाईंले अविस्मरणीय दिनहरूको लागि आवश्यक सबै चीजहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
Bien Aparecida को अभयारण्य
आज हामी बियान अपारेसिडाको अभयारण्यमा प्रवेश गर्दछौं। धेरै वर्षको ईतिहासको साथ पूजा गर्ने ठाउँ र जुन कन्टाब्रियाको संरक्षक सेन्ट भएर सम्पन्न हुन्छ। तीर्थयात्री र पर्यटकहरूको लागि भेट गर्ने ठाउँ जुन यस ठाउँको सौन्दर्य गुमाउन चाहँदैनन्।
आज हामी अस्टुरियसका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरूको समीक्षा गर्दछौं। तपाईको जीवनमा कम्तिमा एक पटक आनन्द लिनु पर्ने महान सुन्दरताले भरिएका प्राकृतिक ठाउँहरू। प्रकृतिले घेरिएको अनन्य कुनाहरू र जहाँ तपाईं आफ्नो मनपर्ने खेलहरू अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी मल्लोर्कामा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरूको उत्कृष्ट समीक्षा गर्छौं। एक स्थान जुन यी सुन्दर कुनाहरूले बनेको छ। क्रिस्टल खाली र पिरोइज पानी जुन राम्रो बालुवाको साथ भेटिन्छ। चट्टानहरू र खालका दृश्यहरू विशेष भन्दा बढी। तपाई अरू के चाहानुहुन्छ?
सेतो गाउँहरूको मार्ग
सेतो शहरहरूको मार्ग एक महान पर्यटन गन्तव्य हो जुन Cádiz प्रान्तमा छ। शहरहरूको माध्यमबाट पैदल यात्रा गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई तिनीहरूको इतिहास, संस्कृति र, निश्चित रूपमा तिनीहरूको उत्कृष्ट सुन्दरतामा तपाईंलाई भिजाउँछ। तपाईं ती मध्ये कुनै पनि सम्झन सक्नुहुन्न किनकि तिनीहरू सबै यस मार्गमा आवश्यक छन्!
काडिजमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
हामी Cádiz मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट समीक्षा गर्दछौं। प्रकृतिले समुद्रको सौन्दर्यलाई बाटो पुर्‍याउने अद्वितीय स्थानहरू। यसमा, तपाईं असंख्य खेल अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र कोस्टा डे ला लुजले हामीलाई छोड्ने फुर्सतका साथ आफ्ना दिनहरू पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ।
म्याड्रिडमा सर्वश्रेष्ठ टेरेसहरू
हामी म्याड्रिडमा सर्वश्रेष्ठ टेरेसहरू भएर हिंड्छौं। रमाईलो ठाउँहरू जहाँ तपाईं साथीहरूसँग पेय वा ट्यापासको मजा लिन सक्नुहुन्छ। दुबै शहरका मानिसहरू र पर्यटकहरूका लागि पूजा गर्ने क्षेत्रहरू।
हामी तपाइँलाई धेरै आकर्षणको साथ एक ठाउँ प्रस्तुत गर्दछौं र तपाइँ जानमा पाउन सक्नुहुन्छ। एक पर्वतीय मासिसिफ जसले धेरै रहस्यहरू लुकाउँछ। सियरा Mágina को भ्रमण जुन यसको अविश्वसनीय दृश्यहरूको लागि यसको लायक छ। तर यो सबै होइन, किनकि तपाईले यसको मनपर्ने नजिकका नगरपालिकाहरूको पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
पालेन्सियामा के हेर्ने
"अज्ञात बेला", जसलाई पेलेन्सिया प्रायः भनिन्छ, उजागर हुनेछ। यदि तपाईंले पालेन्सियामा के हेर्ने भनेर सोच्नुभएको छ भने, आज हामी ती कुनाहरूद्वारा उत्कृष्ट पैदल यात्रा गरिरहेका छौं जुन यसलाई अद्वितीय बनाउँदछ। धेरै आकर्षणको साथ ठाउँ र पाठ्यक्रम, भूतका प्रख्यात र गहनाहरूको साथ जुन तपाईंलाई यस वर्तमानमा पत्ता लगाउन मनपर्नेछ।
हामी स्पेनमा सब भन्दा राम्रो चट्टानहरूको समीक्षा गर्दछौं। अविश्वसनीय क्षेत्रहरू जहाँबाट हामी विचारहरू बुझ्न सक्छौं जुन भुल्न गाह्रो हुन्छ। धेरै विशेष कुनाहरू जुन कम्तिमा पनि तपाईंले आफ्नो जीवनमा एकपटक भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
नासेडेरो डेल उरेडेरा प्राकृतिक वातावरण हो जुन पोखरी र झरनाहरूको संयोजनबाट बनेको हुन्छ, जहाँ पानीको रंगले स्पष्ट पार्दछ कि सौन्दर्य हरेक चरणमा छ। यस ठाउँको भ्रमणको फाइदा लिन तपाईंले जान्नुपर्ने सबै चीज पत्ता लगाउनुहोस्।
क्यामिनो डेल नोर्टेको सबै चरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्। यो सान्टियागो डे कम्पोस्टिलाको तीर्थयात्रामा हामीसँग रहेको एउटा पुरानो हो। ईतिहासको साथसाथै, यसले हामीलाई यसको दृश्यहरूको आनन्द लिन र प्रत्येक शहर वा शहर बारे अझ धेरै जान्न अनुमति दिन्छ।
चकलेट संग्रहालय एक ठाउँ हो जुन हामी याद गर्न सक्दैनौं। स्पेनमा हामीसँग यस प्रकारका धेरै कुनाहरू छन्। एक महान कथा को माध्यम बाट एक मिठो पैदल। के तपाईंले कुनै भ्रमण गर्नुभयो?
म्याड्रिड को रहस्य
यी कुनाहरु वा माद्रिद को रहस्य पनि भनिन्छ सम्झना छैन। स्थानहरु अलि कम ज्ञात तर उस्तै सुन्दरताको साथ अन्यहरु।
बार्सिलोना को गथिक क्वार्टर
त्यहाँ धेरै र धेरै विविध कुनाहरू छन् जुन हामी भेट्न सक्दछौं बार्सिलोनाको गोथिक क्वार्टरको बारेमा कुरा गर्दा। आज हामी तिनीहरूलाई तिम्रासाथ प्रस्तुत गर्दछौं ताकि तिनीहरू तपाईंबाट भाग्न सकेनन्।
यो एक आकर्षक ठाउँ हो। Vinuesa मा तथाकथित ब्ल्याक लगुनले वर्षभरि धेरै पर्यटकहरूको ध्यान आकर्षण गरेको छ। किन फेला पार्नुहोस्!
नेरजामा के हेर्ने
नेरजामा के हेर्ने पत्ता लगाउनुहोस्। कोस्टा डेल सोलमा एउटा अनौंठो र विशेष ठाउँ जसले तपाईंलाई मायामा पार्छ। तपाईं बुझ्नुहुनेछ कि किन यो सब भन्दा धेरै पर्यटन गन्तव्य हो।
केप डे क्रियसमा के हेर्ने
यदि तपाईंलाई केप डि क्रियसमा के हेर्ने हो भनेर थाहा छ भने, तपाईं ऐतिहासिक स्पर्शहरू र अविश्वसनीय किंवदन्ती र परम्पराहरूको साथ सबैभन्दा सुन्दर प्रकृतिमा प्रवेश गर्नुहुनेछ जुन हातमा जान्छ।
एक्लै यात्रा गर्न कसरी तयारी गर्ने
यदि तपाईं एक्लै यात्राको लागि कसरी तयारी गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने, आज हामी तपाईंलाई उत्तम चरणहरू, सुझावहरू र यस प्रकारको यात्रा लिने फाइदाहरू पनि बताउँछौं।
Bruges मा के हेर्ने याद नगर्नुहोस्। एउटा शहर जसले तपाईंलाई पहिलो नजरमा प्रेममा पार्छ। यो एक आँखा झिम्के मा तपाईं मध्यकालीन समयमा फिर्ता ले हुनेछ।
यसको सबैभन्दा प्रतीकात्मक स्थानहरू र यसको किनाराहरूमा इतिहास र सौन्दर्यले भरिएको अल्मेरियामा के हेर्ने पत्ता लगाउनुहोस्। धेरै आकर्षक यात्रा!
वाल अफ लुगोले प्रस्ताव गरेको सबै चीजलाई नभुल्नुहोस्। यसको इतिहास देखि भित्र सम्मिलित सबै कुरा, यो हेर्न लायक छ।
Almodóvar डेल रियो को महल
Almodóvar डेल रियो को महल हामीलाई धेरै अनुभव बाँच्न लिन्छ। अवश्य पनि, सबै अर्को युगका जहाँ महापुरूषहरू दिनको क्रम हो।
मेनोर्कामा कार भाडा
मेनोर्कामा कार भाडामा लिने सबै सुविधाहरू र तपाईं लिन सक्नुहुने मार्गहरू पत्ता लगाउनुहोस्, अधिक सहज तरीकाले। त्यसोभए तपाईं एक कुना पनि याद गर्नुहुन्न
पाटिओस डे कार्दोबा के हो पत्ता लगाउनुहोस्, साथै प्रति वर्ष प्रतिस्पर्धाको रूपमा आयोजित र तपाईं यस प्राचीन परम्पराको बिभिन्न प्रकारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
कुएनकाको जादू गरिएको शहर
यस आवश्यक मार्गनिर्देशनको साथ कुन्काको एन्चेन्टेड सिटीको प्रत्येक कुनामा आनन्द लिनुहोस्। तपाईंको औंलाको टुप्पोमा तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा हुनेछ।
कर्डोबामा के हेर्ने
यदि तपाईं कर्डोबामा के हेर्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने, आज हामी7स्थानहरू प्रस्तुत गर्दछौं जुन एउटा विशेष आकर्षण हो र तपाइँले देख्न रोक्न सक्नुहुन्न।
यदि तपाईं सेभिलमा के हेर्ने हो जान्न चाहानुहुन्छ भने, यी १० आवश्यक ठाउँहरू नभुल्नुहोस् आन्डलुसियाको राजधानीको आनन्द लिन। के तपाईं ती सबैलाई चिन्नुहुन्छ?
म्याड्रिडमा उत्तम प्राकृतिक पोखरीहरू
यदि तपाईं सूर्यको दिन, नुहाउने र राम्रो वातावरणको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, म्याड्रिडमा उत्तम प्राकृतिक पोखरीहरू नछुटाउनुहोस्। आकर्षक कुनाहरू।
क्युवास डेल सोप्लाओ, क्यान्टाब्रियामा एक प्राकृतिक आश्चर्य
तथाकथित क्युवास डेल सोप्लाओ प्रकृतिको आश्चर्य हो। हामी तपाईंलाई त्यहाँ कसरी जान्छौं बताउँछौं, मूल्यहरू, तालिका, नजिकका मार्गहरू र अधिक!
इराती वन खोज्नुहोस्, आफैलाई गुमाउने ठाउँ जुनसँग असंख्य मार्गहरू, दृश्यहरू र अनुपम सौन्दर्य छन्। यो नछुटाउ!
कामिनीटो डेल रे: मालागामा एड्रेनालाईन
मालागा प्रान्तको मध्यभागमा, कामिनीटो डेल रे फुटब्रिज सबैभन्दा रोमाञ्चकारी क्षणहरू सुनिश्चित गर्दै उचाइहरूमा ओर्लन्छ।
स्यान जुआन डे गजाटेलुगाक्सेको जादुई टापु
बास्क तटमा एक अनिवार्य स्टप स्यान जुआन डे गजाटेलुगाक्से हो। एक स्थान जसले परम्परालाई जादुई वातावरणसँग मिलाउँछ। हामी यसको रहस्य बताउँछौं।
स्पेनमा most सबैभन्दा र colorful्गीन ठाउँहरू
Smurfs को शहर वा लास Palmas को टापु आकर्षण स्पेन मा यी अर्को most सबैभन्दा रंगीन स्थानहरू बनाउँछ।
Cabo de Gata मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट
राम्रो मौसम को आगमन संग, स्पेनिश तट संग नयाँ अनुभव को लागी खोज Cabo de Gata को उत्तम समुद्र तट मा सपनाको स्थान मा फेला पार्छ।
के हेर्नको लागि Almuarcar, ग्र्यानाडाको उष्णकटिबंधीय तटमा
ग्रेनाडाको कोस्टा ट्रपिकलमा अवस्थित, Almuñécar एक ठाउँ हो जुन समुद्री तट, प्रकृति र मनोरञ्जनको उत्तम कम्बो हो।
बार्सिलोनामा outdoor आउटडोर योजनाहरू
बार्सिलोनाका यी outdoor आउटडोर योजनाहरूमा र colored्गीन फव्वारा देखि ओपन-एयर सिनेमा सत्रहरू सम्मिलित सबै कुरा समावेश छ क्लासिक्स जस्तो पार्क गोयल।
तार्रागोना: भूमध्यसागरमा इतिहास र संस्कृति
तार्रागोना शहरले हाम्रो देशको कला, संस्कृति र ईतिहासको सब भन्दा आश्चर्यजनक नमूनाहरू एक साथ ल्याउँदछ।
विश्वभरि १० आकर्षक शहरहरू
शहरी कला, नीला सडक वा रंगीन घरहरूको लाइब्रेरीहरू संसारका यी आकर्षक शहरहरूमा समावेश भएका केही प्रस्तावहरू हुन्।
संसारमा places स्थानहरू जहाँ स्टार वार्स सागा फिल्माइएको थियो
सेभिल, ट्युनिसिया वा माल्दिभ्स विश्वका केही स्थानहरू छन् जहाँ स्टार वार्स सागा फिल्माइएको थियो। नयाँ आशाबाट भर्खरको दुष्ट एकमा।
Is टापुहरू तपाईले आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक जानुपर्नेछ
यी is टापुहरू बीच जुन तपाईले आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक भ्रमण गर्नुपर्नेछ हामीले एशिया वा क्यारिबियनमा केही सब भन्दा विशेषता प्याराडाइजहरू भेट्टायौं।
संसारमा be समुद्री तटहरू जुन तपाईले अवलोकन गर्नुपर्नेछ
फिलीपीन्सदेखि मेक्सिको सम्म सफ्ट बालुवा र पिरोइज पानीको विभिन्न प्याराडाइजहरू तपाईंले अवलोकन गर्नु पर्ने संसारको यी be समुद्र तटहरू।
१० आश्चर्यजनक युनेस्को अमूर्त सम्पदा
यी १० आश्चर्यजनक युनेस्को अमूर्त सम्पदा म्याक्सिकोको र from्गदेखि योगसम्म फ्यालास अफ भ्यालेन्सियासम्मका छन्।